Shirkada Shiinaha ee ugu Fiican Moringa Oil warshad saliida lagama maarmaanka ah iyo soosaarayaasha | HaiRui
Iniin khardal le'eg Xanaaqsan
Nuurad huruud khafiif ah
Culeys gaar ah @ 25 ° C:
Saliida Moringa waa saliid fudfudud oo ku faafta si fududna maqaarka ugu dhuuqa. Fiitamiinnada A, B, C, E, aashitada dufanka leh ee aan dheregsaneyn iyo timireetik, oleic iyo linoleic acids ayaa bixiya astaamaha qoyaanka iyo nafaqada badan. Saliida Moringa waxay ka kooban tahay 1,700 antioxidants waxayna khubaradu u arkaan inuu ka mid yahay "saliidaha is qurxinta ee ugu weyn abid". Maaddaama ay sarreyso
isku soo ururinta waxyaabaha sunta lagu buufiyo iyo kuwa ka hortaga bararka, Saliida Moringa waxay ka caawisaa yareynta muuqaalka xariiqyada iyo duuduubka oo loo adeegsado in lagu nadiifiyo oo lagu bogsado maqaarka. Waxaa loo arkaa inay ugufiican tahay duugista iyo codsiyada udugga. Saliida waxay ka heleysaa arjiga noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kareemka kahortaga gabowga, waxyaabaha daryeelka timaha, saabuun iyo jirka oo la maydho, kareemka wajiga, cadarka iyo udgoonka.
Saliida Moringa waxay ka caawisaa soo nooleynta wajiga iyo maqaarka
Nadiifi dareere huruud ah
Tusmada caadiga ah
Fasalka daweynta ee la isku qurxiyo, caafimaadka, cuntada
Udgoon gaar ah oo moringa ah
Duugista, qurxinta daryeelka maqaarka, faafin, daawo
saliidda iniin khardal waxay ku habboon tahay cirridka guud, Bukaannada qaba hyperlipidemia, dhiig-kar, bukaannada cudurka wadnaha, rabitaanka cuntada oo lumiya ayaa ku habboon isticmaalka.
1. Waxay leedahay saamaynta appetizer, waxay sare u qaadi kartaa rabitaanka cuntada
2. Waxaa jira hawl sun ah oo sumeeyn ah. Markaa salmon ceyriinka ah iyo cunnooyinka kale ee badda waxaa badanaa lagu rakibay mustard
3. Si looga hortago suuska ilkaha, kansarka, xinjirowga dhiiga. Saamayn gaar ah ku yeelato daaweynta neefta
4.Si looga hortago kolestaroolka sare, dhiig karka, wadne xanuunka, yareynta u nuglaanshaha dhiiga
5. jirka, saliida mustard waa saliid duugis fiican
Saliida Moringa Ee Maqaarka
Saliid Moringa Virgin ah
Qiimaha Jumlada Saliida Jumlada Badan
Fasalka Cuntada la cuni karo Dabiiciga Dabiiciga ah Abuurka ...
100% dareere saliid dufan dabiici ah
Warshadaha organic 100% qabow saafi ah mo cadaadiyey ...
10ml 50ml 500ml 25kg saliid castor qabow la cadaadiyey
Miisaanka Miisaanka Duugista Miisaanka Saliidda Muhiimka ah ...